China VSD Vertical Sump Pump (Repalce SP) vagadziri uye vanotengesa | damei kingmech pombi
Unyanzvi: 17-1267m3 / h
Chinyorwa: Cr27, Cr28, yerabha liner zvinhu
Type VSD pombi akamira, centrifugal slurry pombi akanyudzwa mune sump kushanda. Izvo zvakagadzirirwa kuburitsa hasha, hombe chidimbu uye yakakwira density slurries. Pombi idzi hadzidi chero shaft chisimbiso uye yekuvhara mvura. Vanogona zvakare kuvhiyiwa zvakajairika kuitira kukwana kukweva mabasa. VSD pano zvinoreva Vertical Sump Duty Slurry Pump.
iyo inokodzera mamiriro ekushanda ezinga rakadzika. Iyo yekuvakisa inotakura yekuvaka inowedzerwa mupombi pahwaro hwepombi yakajairwa, saka iyo pombi ine zvese zviri zviviri kushanda kwakadzikama uye yakafara application renji, asi kuyerera mvura kunofanira kusungirirwa kune inotakura inotakura.
Zvinyoro nyoro zvemhando VSD pombi inogadzirwa nesabrasion-resistant simbi
Ese mativi erudzi rweVSD pombi akanyudzwa mune emvura akasungirirwa nerabha yekunze liner. Izvo zvakakodzerwa kutakura hapana-kumucheto angle hasha slurry
Kubereka Gungano 一 Mabheyaringi, shaft nedzimba zvakaenzanisirwa ruzhinji kuti zvidzivise matambudziko ane chekuita nekushanda kwemakesi akavezwa munzvimbo dzekutanga dzinomhanyisa.
Gungano iri girisi rakaiswa mafuta uye rakanamwa ne labyrinths; iyo yekumusoro ndeye girisi yakacheneswa uye yepazasi inodzivirirwa neakakosha flinger. Yekumusoro kana yekutyaira kumagumo inobereka ndeye yakafanana roller mhando kana iyo yepasi inobereka iri yakapetwa kaviri taper roller ine preset magumo kuyangarara. Iyi yepamusoro yekuita inotakura kurongeka uye yakasimba shaft inobvisa
kudiwa kwekutakura kwakadzika kwakadzika.
Column Assembly 一 Zvakakwana akagadzira kubva munyoro simbi. Iyo VSDR modhi ndeye elastomer yakavharwa
Casing 一 Ine bhaudhi-pane yekubatanidza padanho rekoramu. Iyo inogadzirwa kubva kune yakasakara inomira alloy yeiyo SP uye kubva kuumbwa elastomer yeiyo VSDR.
Impeller, Kaviri kukweva kusundira (kumusoro uye pasi kupinda) inokonzeresa yakaderera axial inotakura mitoro uye ine inorema yakadzika vanes yekukwirisa kupfeka kusagadzikana uye nekubata makuru akasimba. Pfeka maalloys anodzivirira, polyurethane uye zvakaumbwa elastomer impeller zvinoshandurana. Iyo impeller yakashongedzwa axially mukati mekukanda panguva yegungano nevekunze shims pasi petsoka dzedzimba tsoka Hapana kumwe kugadzirisa kuri kudikanwa.
Yekumusoro Sefa, Kudonhedza-musimbi mesh; snap-on elastomer kana polyurethane yeVSD uye VSDR pombi. Strainers anokwana mukoramu kuvhura.
Yekunze strainer, Yakakwenenzverwa simbi kana polyurethane yeSP; yakaumbwa snap-on elastomer yeVSDR.
Kubuda Pipe 一 Simbi yeVSD; elastomer yakavharidzirwa VSDR. Yese yakanyoroveswa simbi zvikamu zvakakwana ngura zvakachengetedzwa.
Kunyudzwa Mabheyarari 一 Hapana
Kusagadzikana 一 Anze agitator pfapfaidzo yekubatanidza gadziriro inogona kuiswa mupombi senzira. Neimwe nzira, mechiniki agitator inokwenenzverwa kune yakawedzera shaft inobuda kubva paziso remhepo.
Zvishandiso 一 Pombi dzinogona kugadzirwa mune dzinopwanya uye dzinokanganisa kusagadzikana zvinhu
Metallurgical, Mining, Marasha, Simba
Pashure: VFD Vertical Froth Pump (Repalce AF)
Zvadaro: WAD isina kusimba hasha Duty Slurry Pump (Repalce L / M)
CFD Dutu Rinopa Duty Pump (Tsiva-MC & MCR)